UNWTO Mhinduro kuKenya: Ndiani anogona kumisa Munyori Mukuru Zurab Pololikashvili?
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » UNWTO Mhinduro kuKenya: Ndiani anogona kumisa Munyori Mukuru Zurab Pololikashvili?
Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Hurumende Nhau • Kenya Kupwanya Nhau • nhau • vanhu • Spain Kuputsa Nhau • Trending Now
Tsamba iri mukugadzirwa kuNWTO Headquarters muMadrid.
Tsamba iyi inotarisirwa kuti HAPANA kukupa kweKenya kugamuchira General Assembly.
A zvino ingave kurova pamusoro tourism, gakava uye udyire.
Pane angamisa kudhindwa kwetsamba iyi here?
Mushure mekunge UNWTO yazivisa nyika dzenhengo kuti Morocco haingave nzvimbo yeGeneral Assembly iri kuuya, Kenya zuva rimwe chetero yakapihwa kuti iite chiitiko.
Yakataurwa na MoroccoNewsNews FR, Zoubir Bouhoute, nyanzvi yekushanya uye director weProvincial Tourism Council (CPT) yeOuarzazate, anodemba sarudzo idzi dzinomiririra njodzi yekushanya kweMoroccan iyo iri kuyedza neimwe nzira kuporesa maronda akakonzerwa nedambudziko reCovid-19.
Kenya yaive yechipiri mumutsara apo Morocco, Philippines neMorocco dzakapa kuitisa General Assembly paGA yekupedzisira muSt. Petersburg makore maviri apfuura. Ikozvino ijana reKenya?
Haisi chakavanzika, kuti kufambisa chiitiko kubva kuMorocco kudzokera kuMadrid budiriro huru kune anoshuvira UNWTO Secretary-General.
Muna Ndira skeleton Executive Council yakaungana muMadrid mukati meiyo rekodhi Corona kubuda, nguva yekudzoka kumba, uye mamiriro ekunze. Zvaive zvese zvekukurudzira Zurab Pololikashvili kwechipiri temu seSG. Kunyangwe mutungamiriri weZurab weGeorgia akauya akakoka nhumwa dzese dzekuvhota kuzodya manheru pamberi pesarudzo, achisiya mumiriri ega achirwisa Zurab murima.
Vashanu vakawedzerwa vavhoti vaive nenyaya dzehutongi hwejekerere dzakaonekwa neUNWTO Secretariat, vasingakwanise kuendesa zvakare mapepa uye mushandirapamwe vachipokana neZurab nekuda kwekupfupika kwenguva yakatarwa yakashamisa munhu wese.
Kuve neGeneral Assembly muguta rimwe chetero kunomutsa mubvunzo wekunyengetedzwa kwakanyanya mukuitwa kwesarudzo dzeSecretary-General. General Assembly inofanirwa kuvhota pane zvakurudzirwa ne Executive Council uye nekusimbisa.
Zvichakadaro, Zurab Pololikashvili pakaita basa rakapetwa kaviri munguva pfupi yapfuura mamiriro anosanganisira Saudi Arabia. Izvi zvakakonzera gakava pakati peSpain neSaudi Arabia pamusoro pekutambira muzinda weUN Affiliated agency. Munyori Mukuru weUN akabatanidzwa.
eTurboNews yakangoziviswa neyakavimbika sosi mukati meUNWTO muMadrid:
Tsamba iri kunyorwa neUNWTO Secretariat kuGurukota reKenya nhasi, ichipindura kurudziro rwegurukota rekuita musangano mukuru muKenya.
Tsamba iyi inotarisirwa kutenda Minister Najib Balala nekupihwa kwavo nenyasha kuitisa General Assembly.
Tsamba iyi ichava NO nekuda kweiyo nguva yemutemo, ichitaura nezvenguva yemazuva makumi mana, kunyangwe Minister Balala vakapindura UNWTO mukati maawa makumi maviri nemana.
mukati Maawa makumi maviri nemana eKenya achitumira chikumbiro kuUNWTO Madrid paSunday, nyika yakanga yatove kuseri kweKenya. Yakanga iri nhaurirano huru pakati pevatungamiri muAfrican Tourism Board nemusi weSvondo.
Tichifunga nezvemamiriro ezvinhu kuti Zurab anopomerwa mhosva yekubiridzira sarudzo, kukanganisa nyika dzenhengo neHQ kufamba, zvingava zvakamufadza kuti asakonzerese imwe mamiriro ezvinhu apo nyika dzenhengo dzinogona kuona zvakajeka UNWTO izere nezvesarudzo yake, uye kwete nezve kuwana kushanya. dzokera munzira.
Paakabvunzwa, Gloria Guevara, aimbove CEO weWTTC uye chipangamazano chazvino kuGurukota rezvekushanya kuSaudi Arabia akaudza. eTurboNews: "Ndiri kuedza kupindira manje."
Nhasi inogona kunge iri Chipiri zuva remagetsi reUNWTO, Kenya, uye World of Tourism.
Logan Revhi anoti:
Gunyana 31, 2021 pa 06: 10
Zurab Pololikashvili ndiye munyori-mukuru mutsva weUnited ... vhota kudzivirira "kunyadziswa" uye "kuremekedza kuvimbika". Zvinotonyanya kukosha, zvirambidzo pakufamba zvinodzivirirawo kushanya kubva pakuunza kugona kwayo kuvaka ramangwana riri nani kune vese.